Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.1.3 Non-reactive
Mmesho bụ ọtụtụ obere yiri ịgbanwe omume na nnukwu data isi mmalite.
Otu nsogbu nke na-elekọta mmadụ research bụ na ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe àgwà ha mgbe ha maara na ha na-eme ememe site na-eme nnyocha. Social ọkà mmụta sayensị n'ozuzu na-akpọ nke a bụ omume mgbanwe omume na-eme nchọpụta mmesho reactivity (Webb et al. 1966) . Otu akụkụ nke nnukwu data na ọtụtụ na-eme nchọpụta chọta ekwe nkwa bụ na sonyere bụ n'ozuzu amaghị na ha data na-a weghaara ma ọ bụ na ha marala ya a data collection ọ na-abụghịzi agbanwe àgwà ha. N'ihi na ha bụ ndị na-abụghị reactive, ya mere, ọtụtụ na isi mmalite nke nnukwu data nwere ike iji na-amụ omume na ọ bụghị amendable ka ezi mmesho na mbụ. Dị ka ihe atụ, Stephens-Davidowitz (2014) na-eji na njupụta nke akpa ókè agbụrụ okwu na search engine gbara ajụjụ tụọ agbụrụ animus na dị iche iche n'ógbè nke United States. The na-abụghị reactive na nnukwu (lee gara aga ngalaba) ọdịdị nke search data nyeere nha nke ahụ ga-esi ike iji ụzọ ndị ọzọ, dị ka nnyocha ndị e mere.
Non-reactivity Otú ọ dị, ọ dịghị hụ na a data na-n'ụzọ ụfọdụ a kpọmkwem na-egosipụta nke ndị mmadụ omume ma ọ bụ àgwà. Dị ka ihe atụ, dị ka otu respondent gwara Newman et al. (2011) , "Ọ bụghị na m na-adịghị nsogbu, Echegh im na m etinye ha na Facebook." N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ nnukwu data isi mmalite ndị na-abụghị reactive, ha bụ bụghị mgbe niile free nke na-elekọta mmadụ desirability echiche ọjọọ , na mmehie ndị mmadụ na-na-ewetara onwe ha na ụzọ kasị mma. Ọzọkwa, dị ka m na-akọwa ihe n'okpuru ebe a, a data isi mmalite na-mgbe ụfọdụ impacted site na ihe mgbaru ọsọ nke usoro ụzọ nwe, a nsogbu akpọ algorithmic etinye (a kọwara ihe n'okpuru).
Ọ bụ ezie na ndị na-abụghị reactivity bara uru imeso ndị nnyocha, nsuso ndị mmadụ omume na-enweghị nkwenye ha na oha na eze mata na-ewelite usoro ziri ezi nchegbu tụlere n'okpuru na na zuru ezu n'Isi 6. A ọha backlash megide ụba digital surveillance pụrụ iduga nnukwu data na usoro ka ha ghọọ ihe reactive karịrị oge, na ike nchegbu banyere digital surveillance pụrụ ọbụna ime ka ụfọdụ ndị na-agbali iji nwepu aha nke nnukwu data na usoro kpamkpam, na-amụba nchegbu banyere ndị na-abụghị representativity (a kọwara ihe n'okpuru).
Atọ ndị a mma Njirimara nke nnukwu data na-elekọta mmadụ research-big, mgbe niile-na, na-abụghị ndị reactive-adịkarị-ebilite n'ihi na a data isi mmalite E keghị site na-eme nnyocha maka nnyocha. Ugbu a, m ga-atụgharị nke asaa Njirimara nke nnukwu data isi mmalite ndị na-ezighị maka nnyocha. Atụmatụ ndị a na-agbasaghị ebilite n'ihi na a data e kere na-eme nnyocha maka nnyocha.